MUNAASABAD BALAADHAN OO LAGU TAAGEERAYAY SHIRWAYNIHII 8aad ee XDSHSI EE KA DHACAY FIIG IYO HORUMARKA,N/GALYADA IYO MAAMULKA SUUBAN DDSI - Cakaara News
MUNAASABAD BALAADHAN OO LAGU TAAGEERAYAY SHIRWAYNIHII 8aad ee XDSHSI EE KA DHACAY FIIG IYO HORUMARKA,N/GALYADA IYO MAAMULKA SUUBAN DDSI
Jigjiga(CN)Sabti Dec-20-2014.Munaasabad aad loosoo agaasimay oo lagu taageerayo shirwaynihii 8aad ee XDSHSI ee kadhacay magaalada Fiiq ee gobolka Nogob iyo horumarka baaxada wayn,maamulka suuban ee Mudane Madaxwyne Abdi Mahamud Omar hogaanka u hayo iyo nabadgalyada guud ee ka taabagashay Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiyo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Melbourne ee cariga Australia habeenkii Jimcihii 19/12/2014.
Munaasabadan ayaa waxaa soo wada abaabulay ururka qurbajoogta Soomaalida Itoobia ee Australia (ESDCA) iyo ururka ogaden Community in Australia (COA). Munaasabadan oo si baxaad wayn looga soo qaybgalay ayaa waxaa qudbad dheer ka soo jeedisay gudoomiyaha ururka ESDCA Marwo Umal khayr Hagi Ali Dalmar oo si qoto dheer uga warbixisay safarki qiimaha badnaa ee ay kaga qaybgaleen iyada iyo xubno kale shirwaynihii 8aad ee xisbiga XDSHSI ku yeeshay Xarunta Gobolka Nogob ee magaalada Fiiq.
Gudoomiye Umal Khayr waxay munaasabada ku soo bandhigtay warbixin qoto dheer oo dhinac walba taabanaysa iyada oo adeegsanaysay POWER POINT oo ay sharax guud kaga warbixinaysay waxqabadka xukuumada maanta ay ka taabogalisay sanadihii ugu danbeeyay dhinacyada horumarka,adeegyada aasaasiga ah,kaabayaasha dhaqaale,shaqo abuurka iyo barnaamijka ka faaiidaysiga wabiyada iyo dooxooyinka ee Dibudejinta.
Waxayna sidoo ka ugu baaqday in wadanka la maalgashado xubina laga noqdo Ururka horumarinta Soomaalida Itoobiya. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay siyaasiyiin, Aqoonyahano,Ururada Bulshada ee geeska Africa,Madax ka tirsan dawlada australia iyo waliba bulshada inteeda kale kuwaasoo bogaadiyay isbedelada baaxada wayn ee uu ku talaabsaday XDSHSI ee majaraha hogaamineed u haya Xukuumada maanta ee uu madaxwaynaha ka yahay mudane CMC.
Dhanka kale Waxaa munaasabada wacdaro ka dhigay kooxda Melbourne Somali Band oo ku soo bandhigay hees cusub oo loo sameeyay DDSI oo ay qaaday fanaanada Deegaan ka soo jeeda Sahro Aydiid oo aad looga qadariyo Melbourne.
Munaasabadu waxay ku soo dhamaatay jawi quruxbadan,caways wanaagsan,qoob ka ciyaar iyo waliba iyadoo dhaantooyinkii wali loo oomanyahay.